Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.5 Helid la'aan
Xogta ay qabtaan shirkadaha iyo dawladuhu way ku adag tahay cilmi-baarayaasha inay galaan.
Bishii Maajo 2014, Hay'adda Nabadsugidda Qaranka ee Mareykanka waxay furatay xarun xogeed oo ku taal Utah miyir-qab leh magac magacyo ah, Xarunta Macluumaadka Xarunta Macluumaadka Xarunta Bilaashka Bilaashka Qaranka ee Sirdoonka Bulshada. Si kastaba ha noqotee, xaruntan xogta, oo loo yaqaan Xarunta Macluumaadka Utah, ayaa lagu soo waramayaa in ay leedahay awooda asturnaanta. Hal warbixin ayaa sheegaysa in ay awood u leedahay in ay kaydiso oo ay hirgeliso dhamaan noocyada isgaadhsiinta oo ay ku jiraan "dhamaystirnaanta dhamaystiran ee emails gaar ah, wicitaanada taleefoonada gacanta, iyo baaritaanka Google, iyo waliba dhammaan noocyada macluumaadka shakhsiga ah-caddaynta gawaarida la dhigto, gaadiidka safarka, iibsashada maktabadda , iyo qashin kale oo 'dhejis ah jeebka' ' (Bamford 2012) . Marka laga soo tago kor u qaadida walaac ku saabsan dabeecadda xasaasiga ah ee macluumaadka badan ee lagu qabtay xogta weyn, taas oo lagu sharaxi doono hoos, Xarunta Macluumaadka Utah waa tusaale aad u xaddidan oo ah ilaha xogta hodanka ah ee aan la helin cilmibaareyaasha. Guud ahaan, ilo badan oo macluumaad weyn oo faa'iido leh ayaa la xakameynayaa oo ay xaddidaan dawladaha (tusaale ahaan, xogta canshuurta iyo xogta waxbarasho) ama shirkadaha (tusaale ahaan, weydiimaha raadinta makiinadaha iyo wicitaanada telefoonka). Sidaa darteed, xitaa inkasta oo ilaha xogtaasi ay jiraan, haddana waa wax aan faa'iido u lahayn ujeedooyinka cilmi baarista bulshada sababtoo ah maaha kuwo aan la heli karin.
Marka aan waayo-aragnimadayda ah, cilmi-baarayaal badan oo ku salaysan jaamacadaha ayaa is-fahmi waayey ilaha qalabkan. Xogtaasi waa mid aan la gaari karin sababtoo ah dadka ku jira shirkadaha iyo dawladaha ayaa ah kuwo nacas ah, caajis ah, ama aan ciriiri lahayn. Taas bedelkeeda, waxaa jira caqabado sharci, ganacsi, iyo anshaxyo oo ka hortagaya helitaanka xogta. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah heshiisyada adeegga shuruudaha ee bogagga internetka ayaa kaliya u oggolaanaya xogta ay isticmaalaan shaqaalaha ama si loo hagaajiyo adeegga. Sidaas daraadeed noocyada macluumaadka ee wadaagista macluumaadka ayaa laga yaabaa inay shirkadaha u soo bandhigaan dacwado sharci ah macaamiisha. Waxaa sidoo kale jira khataro ganacsi oo halis ah oo shirkadaha ku lug leh la wadaago xogta. Isku day inaad aragto sida dadweynuhu uga jawaabi doonaan haddii xogta shakhsiyeed ee shakhsigu ay si khalad ah uga saarto Google oo qayb ka ah mashruuca cilmi baarista jaamacadda. Xadidan macluumaadka noocan oo kale ah, haddii xad dhaafka ah, laga yaabo inay xitaa khatar u tahay shirkadda. Sidaas daraadeed Google-iyo shirkadaha waaweyn ee waaweyn-waxay aad u khatarsan yihiin-ka-faa'iideystaan ​​in la wadaago macluumaadka cilmi-baarayaasha.
Xaqiiqdii, ku dhawaadba qof walba oo ku jira booska si uu u helo macluumaad badan oo badan wuxuu ogyahay sheekada Abdur Chowdhury. Sanadkii 2006, markii uu ahaa madaxa cilmi baarista AOL, wuxuu si ula kac ah u sii daayay bulshada cilmi baarista waxa uu u maleynayay in uu ahaa codsiyada raadinta ee aan loo aqoonsan 650,000 oo isticmaala AOL. Ilaa hadda sida aan u sheegi karo, Chowdhury iyo cilmi-baarayaasha AOL waxay leeyihiin ujeedooyin fiican, waxayna u maleynayeen in ay qirsan yihiin xogta. Laakiin way qaldameen. Waxaa si dhakhso ah loo ogaaday in xogtu aysan aheyn mid qarsoodi ah sida cilmi-baarayaashu u maleynayeen, iyo saxafiyiin ka tirsan New York Times ayaa awood u yeeshay in ay aqoonsadaan qof ka mid ah dataset si sahlan (Barbaro and Zeller 2006) . Marka dhibaatooyinkaas la ogaado, Chowdhury ayaa xogta laga saaray bogga internetka ee AOL, laakiin waxay ahayd waqti dambe. Xogta waxaa lagu soo rogay boggaga internetka, waxayna u badan tahay in la heli karo markaad akhriso buugan. Chowdhury waa la eryay, sarkaal ka tirsan bilayska AOL ayaa is casilay (Hafner 2006) . Sida tusaalahan muujineyso, faa'iidooyinka shakhsiyaadka gaarka ah ee gudaha shirkadaha si ay u sahlanaato helitaanka xogta waa kuwo yaryar oo xaalada xun ee kiisaska waa mid xun.
Cilmi-baarayaashu waxay si kastaba ha ahaatee, waxay mararka qaarkood helayaan xogta aan la heli karin dadweynaha. Dawladaha qaarkood waxay leeyihiin nidaam ay cilmi-baarayaashu raaci karaan si ay u codsadaan helitaanka, iyo sida tusaalooyinka dambe ee cutubkan muujinayaa, cilmi-baarayaashu waxay mararka qaarkood helayaan xogta shirkadaha. Tusaale ahaan, Einav et al. (2015) waxay la shaqeeyeen cilmi-baaraha eBay si uu u barto dalabka online-ka ah. Wax badan ayaan ka hadli doonaa cilmi-baarista ka timid wadashaqayntan ka dib cutubka, laakiin waxaan hadda ku sheegayaa sababtoo ah waxay haysteen dhammaan afarta qaybood ee aan ku arko iskaashiga guulaha leh: danaha cilmi-baarista, awoodaha cilmi-baarista, danta shirkadda, iyo kartida shirkadeed . Waxaan arkay iskaashiyo badan oo suurtagal ah oo ku fashilantay sababtoo ah cilmi-baaraha ama lammaanaha -waxay noqonayaan shirkad ama dawlad-dawlad la'aan ah mid ka mid ah waxyaabahaas.
Xitaa haddii aad awoodi kartid inaad iskaashi la sameysid ganacsi ama aad hesho helitaanka macluumaadka dawlada ee xadidan, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxoogaa hoos udhacay. Marka hore, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad la wadaagto xogtaada cilmi-baarayaasha kale, taas macnaheedu waa in cilmi-baarayaasha kale aysan awoodi doonin in ay xaqiijiyaan oo ay kordhiyaan natiijooyinkaaga. Marka labaad, su'aalaha aad waydiisan karto inay xadidan tahay; Shirkadaha ayaan u badneyn in ay u oggolaadaan cilmi baaris ay u keeni karto inay xun yihiin. Ugu dambeyntii, wada shaqeyntan waxay abuuri karaan ugu yaraan muuqaalka khilaafka xiisaha, halkaas oo dadku ay u malaynayaan in natiijooyinkaaga saameyn ku yeesheen iskaashiyadaada. Dhammaan hoos-u-dhackan waa la xallin karaa, laakiin waa muhiim in la caddeeyo in la shaqeynayo xog aan qofku heli karin qof kastaa labadaba hoos u dhigo iyo hoos u dhac.
Soo koobid, tiro fara badan oo xog ah lama helayo cilmi-baarayaasha. Waxaa jira caqabado sharci darro ah, ganacsi, iyo anshaxeed oo ka hor istaagaya helitaanka xogta, iyo caqabadahaasi ma tagayaan iyadoo tiknoolajiyadu horumarinayso maxaa yeelay maaha caqabado farsamo. Qaar ka mid ah dawladaha qaran ayaa dejiyey nidaamyo u sahlaya helitaanka xogta qaar ka mid ah xogaha qaar, laakiin geeddi-socodka ayaa si gaar ah ugu shaqeeya heer gobol iyo heer degmo. Sidoo kale, xaaladaha qaarkood, cilmi baarayaashu waxay la wadaagi karaan shirkadaha si ay u helaan xogta, laakiin tani waxay abuuri kartaa dhibaatooyin kala duwan ee cilmi-baarayaasha iyo shirkadaha.